हरेक घर बिरामी, हरेक घर आइसोलेशन : RajdhaniDaily.com
सरला सिलवाल - February 9, 2021 0
सरला सिलवाल - February 8, 2021 0
सरला सिलवाल - January 28, 2021 0
सरला सिलवाल - January 26, 2021 0
सरला सिलवाल - June 18, 2021 0
Home बिचार हरेक घर बिरामी, हरेक घर आइसोलेशन
मानिस एकपटक मर्छ तर मृत्युको अनुभूति एकपटक मात्र हुने होइन रहेछ । मानिस पटक पटक मृत्युको मुखमा पुग्ने रहेछ र अन्तिम एकपटक मात्र मृत्युवरण गर्ने रहेछ । कोरोना महामारीको कटु अनुभवले यही सन्देश दिएको छ । यही पाठ सिकाएको छ । यतिबेला मुलुकका खासगरी शहरी क्षेत्रमा हरेक घरमा कोरोनाका विरामी छन् । अस्पतालमा पाइला राख्ने ठाउँ छैन । त्यसैले हरेक घर बिरामी आवास गृह (आइसोलेशन) बनेका छन् । खासमा आइसोलेशन अलगिएर बस्नु हो, अरुभन्दा पर, अरुको संगत विना तर रहरले कसैले घरलाई आइसोलेशन बनाइरहेको होइन । अस्पतालको अभाव र दुर्दशाले अस्पताल भन्ने शब्द नै सुन्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो बनाइ दिएको छ ।
मेरा नातेदार पति पत्नी नै कोेरोना संक्रमित हुनु भयो । उहाँहरुको छोराको जागीरका कारण अस्पतालमा भर्ना गर्न कठीन भएन । केही दिनपछि बुहारी पनि संक्रमित भइन् । पाँच र एक वर्षका साना नानीबाबुको हेरचाहमा समस्या आयो । सुरक्षित तवरले आफैंले उनीहरुको रेखदेख गर्नुको विकल्प थिएन । छोरा जागीरको क्रममा देश बाहिरै छन् । अचानक बुहारीको अक्सिजनको मात्रा कम भएछ । यो जानकारी पाएका छिमेकी मनकारी नै मान्नु पर्छ, उनीहरु घरमा गएर हुने सम्मको कोसिस गर्दै रहेछन् । मलाई फोन आयो र अवस्थाको जानकारी मात्र गराइएन, तुरुन्त अस्पताल लैजान पर्ने भएकाले तत्कालै आउन भनियो । खाजा खाने तयारीमा रहेको म खानेकुरा टेवलमै छाडेर कुनै सोच विचारै नगरी उनीकहाँ पुगे । छिमेकीले एम्बुलेन्स बोलाइसकेका रहेछन् । उनका सासुससुरा भएकै अस्पतालमा उनको हक लाग्थ्यो, यहीं पु¥याएँ ।
एम्बुलेन्सबाट कसरी बिरामी ह्वीलचेयरमा राखें भन्ने त मलाई मात्रै थाहा थियो । मेरो बिरामी मृत्युको मुखमा पुगिरहेको देखिरहेको थिएँ । त्यहाँ कसैबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गर्ने अवस्था नै थिएन । सहयोगका लागि त्यहाँ कोही थिएन ।
अस्पताल पु¥याउने कुरामा मलाई त्यति तनाव भएन, जति अस्पताल पु¥याएपछि मैले भोगें । एम्बुलेन्सबाट बिरामी निकाल्न सहयोग गर्न कोही आएन । जसोतसो ह्वील चेयरमा बिरामी राखेर कुदाएँ । बिरामीको मुण्टो लत्रिसकेको थियो । उनलाई तत्काल अक्सिजन दिन नसके नबाँच्ने जस्तो मनले भनिरहेको थियो । अत्तालिदैं सिधै कोभिड युनिटमा छिरें । त्यहाँ भित्रको अवस्था कहाली लाग्दो थियो । हवीलचेयरमा लगेको बिरामी किन ल्याएके र के भयो भनेर सोधखोज गर्ने कोही थिएन । म आत्तिएर चिच्याएँ –लौ न डाक्टर साव, मेरो बिरामी मर्न लाग्यो, अक्सिजन दिनु प-यो । मेरो आवाज सुन्ने कोही थिएन । वार्डमा यति भीड थियो, को बिरामी र को कुरुवा ? को नर्स र को डाक्टर छुट्याउने अवस्था थिएन । मेरो अनुनय कसैले सुनेन ।
म विकल्पहीन भएँ । मेरो बिरामी जसरी पनि बचाउनु छ भन्ने मात्रै मनमा थियो । अचानक अर्का नातेदार सम्झे, जो त्यो अस्पतालसँग सम्बन्धित कार्यालयमा थिइन् । मैले उनलाई नै गुहारें । मैले उनलाई गुहारेको डाक्टर नर्सलाई मन परेन । उनीहरु फुर्सदमा बसेर मेरो बिरामी नहेरको थिएनन्, तर अस्पताल वार्डमा पु-याइसकेको आकस्मिक उपचार चाहिएको बिरामीका प्रति देखाउनु पर्ने संवेदना देखाइरहेका थिएनन्ं । उनीहरुले मेरो व्यवहारलाई कम्प्लेन गरेको ढंगमा लिए र रिसाउँदै बिरामीलाई उपचारको व्यवस्थापन गरिदिए । उनीहरु म बिरामी लिएर सिधैभित्र पसेकोमा पनि आपत्ति जनाइरहेका थिए तर म विकल्पहीन थिएँ । एम्बुलेन्सबाट कसरी बिरामी ह्वीलचेयरमा राखें भन्ने त मलाई मात्रै थाहा थियो । मेरो बिरामी मृत्युको मुखमा पुगिरहेको देखिरहेको थिएँ । त्यहाँ कसैबाट सहयोग पाउने अपेक्षा गर्ने अवस्था नै थिएन । सहयोगका लागि त्यहाँ कोही थिएन ।
आज लाखौं नागरिक कोभिड होला भन्ने त्राशमा घरभित्र निसास्सिएका छन् । हरेक घर आइसोलेशन बनेको छ । हरेक घरमा बिरामी फेला पर्दैछन् ।
जब उसको उपचारको व्यवस्थापन भयो, त्यसपछि मात्र मैले ‘गर्नु पर्ने काम गरें कि नगर्नु पर्ने ?’ यो प्रश्न मनमा आयो । कोभिड १९ बिरामीको श्वास प्रश्वासबाट रोग सर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । बिरामी मात्र होइन, उसले छोएका वस्तुहरु छुनु अघि अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा म पनि जानकार थिएँ । तर परिस्थिति यस्तो थियो, मैले सावधानी अपनाउन खोज्दै गर्दा उसको जीवन समाप्त भइसक्न सक्थ्यो । मैले उसको जीवन बचाउने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखें । उसलाई अस्पताल छाडेर सिधै घर आएँ । तातो पानीले नुहाएँ, लुगा सफा गरें र आइसोलेशनमा बसें । मेरो घरमा पनि उमेर ढल्केका सासु ससुरा हुनुहुन्छ । नौजवान छोरा छ । मैले आफ्नो मात्र होइन, उहाँहरुको पनि स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नै पर्छ । त्यसकारण म खासमा क्वारेण्टाइनमा छु । कोभिडको दोस्रो लहरसँगै क्वारेण्टाइन शब्द नै हराएको छ, त्यसकारण म आइसोलेशनमा छु ।
मैले त मेरो नातेदारको उद्धार गरें । तर त्यो रात म निदाउन सकिनँ । मनमा अनेक तर्कना आए र भोलिपल्ट मैले गरेको काम थाहा पाउनेहरुको यति धेरै फोन आउन थाले, म उनीहरुलाई जवाफ दिँदा दिंदै र उनीहरुको आशंका सुन्दासुन्दै बिरामी जस्तो भएँ । शारिरीक रुपमा मलाई केही भएको होइन, मानसिक रुपमा मैले आफूलाई केही हुदैन भनेर आफैंलाई बिश्वास दिलाउन कठीन भयो । कमसेकम मैले बिरामी उठाउनु नपरेको भए म सुरक्षित नै रहन्थें कि ? म कोभिड वार्डमा सिधै पस्नु नपरेको भए मलाई केही हुन्नथ्यो कि ? केही शुभेच्छुकहरुले मलाई केही हुन्न भनेर ढाढस नदिएका होइनन्, तर मेरो मनोविज्ञान आफैं कमजोर बन्दै गयो ।
मलाई त्यस्तो केही भएन । यसका लागि भगवानप्रति आभारी छु । मेरो बिरामी तंग्रिएकी छ । उसका चिचिला सन्तान सम्झेर कुँढिएको मेरो मन प्रफुल्लित छ । तर अस्पतालको लथालिंग अवस्था, अक्सिजन र बेडको अभाव, आफन्तहरुको अनुनय र चित्कार– यो मेरो आँखले देखेका दृश्यले हरेक पल पिरोलिरहेको छ । आज एक लाखभन्दा बढी नागरिक कोभिड संक्रमित भएर घरलाई आइसोलेशन बनाएर बसेका छन् । आज लाखौं नागरिक कोभिड होला भन्ने त्राशमा घरभित्र निसास्सिएका छन् । हरेक घर आइसोलेशन बनेको छ । हरेक घरमा बिरामी फेला पर्दैछन् । तर एउटा नागरिकले कोभिड संक्रमण भएछ भने पनि म मर्नु पर्दैन, मेरो उपचार गर्ने सरकार छ भनेर आश्वस्त हुन पाएको छैन ।
तपाईं पनि घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् ।
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकमा सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पद्धतिलाई तिरस्कार गर्न खोजिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै...
मृतकका आफन्तद्धारा नारायणी अस्पतालमा तोडफोड
भर्खरै सरला सिलवाल - August 9, 2020 0
वीरगन्ज । नीजि अस्पतालहरुले विरामी भर्ना गर्न नमानेपछि स्थानीयले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा तोडफोग गरेर आक्रोस पोखेका छन् । शनिबार उपचारको अभावमा वीरगन्ज २ छपकैयाकी...
Editor-Picks सरला सिलवाल - September 7, 2020 0
सूचना प्रविधि राजधानी समाचारदाता - May 23, 2021 0
काठमाडौं । रेडमी नोट १० प्रो बेस्ट–इन–क्लास फिचर्सका साथजस्तै १०८ एमपी क्यामेरा, १२० हट्र्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकम स्न्यापड्रागन ७३२ जी, इभोल डिजाइनका साथ...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 29, 2021 0
बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–१० दर्लिङ लागेको होली मेलामा युवाबीच भएको झडप हुँदा दुई युवाको मृत्यु भएको छ । ति दुई युवको झडपका क्रममा...
Breaking News सरला सिलवाल - January 11, 2021 0
Breaking News सरला सिलवाल - March 18, 2020 0
Exclusive सरला सिलवाल - June 13, 2020 0
प्रदेश १ सरला सिलवाल - February 13, 2020 0
भोजपुर । तन्नाको पिङ बनाएर खेल्ने क्रममा भोजपुरमा पासो लागेर एक बालिकाको ज्यान गएको छ । विहीबार टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–७ बतासे बस्ने भाइराज राईकी...
सरला सिलवाल - March 5, 2020